စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလှတဲ့ မင်းသမီးချော အိန္ဒြာကျော်ဇင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ သူမဘဝအကြောင်း… - Voice Of Burma
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလှတဲ့ မင်းသမီးချော အိန္ဒြာကျော်ဇင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ သူမဘဝအကြောင်း…
ဒီနေ့မှာတော့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကထဲက ထင်ရှားလှတဲ့ မင်းသမီးတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးက ချစ်စနိုးနဲ့ အူဝဲလို့ ခေါ်ကြတဲ့ သူမကိုတော့ ၁၉၇၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၄ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ မိဘတွေကတော့ ဦးကျော်ဇင်
နဲ့ ဒေါ်မြသီတာတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးချင်းသုံးဦးရှိပြီး သူမကတော့ အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ဇာတိကတော့ ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့မိဘမျိုးရိုးကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သူမဟာခုထက်ထိနာမည်ကျော်ကြားနေဆဲဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်တာယာရဲ့တူမ ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်အဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်ဇေယျရဲ့မြေး တော်စပ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်.
မင်းသားကြီးကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း တူမတော်စပ်ဖြစ်ပြီး ရာဇာနေဝင်းနဲ့ ဟေမာနေဝင်းတို့နဲ့လည်း အမျိုးတော်စပ်သူပဲဖြစ်ပြီး ပိုင်ဇေရဲထွန်း မောင်နှမဝမ်းကွဲ တော်စပ်သူဖြစ်ပါတယ် ။ဒါ့အပြင် သူမကတူမလေးဖြစ်တဲ့မေတိုးခိုင်ကိုလည်း သမီးလေးတစ်ယောက်လို ချစ်ခင်သူဖြစ်ပြီးအနုပညာ
လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်အောင် မြေတောင်မြှေက်ပေးသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမက ၁၉၉၆ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးမော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စတင်ဝင်ရောက်ာလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ တီဗီမှာကြော်ာငြာမင်းသမီးအနေနဲ့တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲ မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ ကျရာနေရာကနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်လာသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့အပြုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ကောင်းမှုတွေကြောင့်
ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာနေရာတစ်နေရာကို ယူထားနိုင်ပြီးအကယ်ဒမီဆုတွေကို ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလျှောက်လှမ်းနေရင်းနဲ့ မြန်မာ့မင်းသားထဲမှာထိပ်ဆုံးကအောင်မြင်နေတဲ့မင်းသားဖြစ်သူ
ပြေတီဦးနဲ့ရွေလက်တွဲပြီး အောင်မြင်ပြီးလူတိုင်းက အားကျရတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးကို သမီးလေးတစ်ယောက် သားလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအဖြစ် ရေမွေးနဲ့ အိတ်တွေကိုလည်း သူမအမည်နဲ့တင်သွင်းတဲ့အလုပ်ကိုလည်း လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
ခုလက်ရှိမှာတော့သူမရဲ့ကိုယ်ထဲမှာ စီးဆင်းနေတဲ့မတရားမှုကို ငြိမ်ကြည့်နေလို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့် သူမတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ အဖမ်းခံထား၇တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ ပို့သတဲ့မေတ္တာကြောင့် သူမတို့မိသားစုလေးအရင်လိုပျော်ပျော်ရွင်ရွင်ပြန်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူ ဆုတောင်ပေးကြရအောင်နော်….
crd : cele world
စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးလှတဲ့ မငျးသမီးခြော အိန်ဒွာကြျောဇငျဖွတျသနျးခဲ့ရတဲ့ သူမဘဝအကွောငျး…
ဒီနမှေ့ာတော့ မွနျမာ့ရုပျရှငျလောကထဲက ထငျရှားလှတဲ့ မငျးသမီးတှထေဲက တဈဦးဖွဈတဲ့ ထပျဆငျ့အကယျဒမီ အိန်ဒွာကြျောဇငျရဲ့ အကွောငျးကို တငျဆကျပေးသှားမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အားလုံးက ခဈြစနိုးနဲ့ အူဝဲလို့ ချေါကွတဲ့ သူမကိုတော့ ၁၉၇၇ခုနှဈ၊ ဧပွီလ ၂၄ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ မိဘတှကေတော့ ဦးကြျောဇငျ
နဲ့ ဒျေါမွသီတာတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ မှေးခငျြးသုံးဦးရှိပွီး သူမကတော့ အငယျဆုံးဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ဇာတိကတော့ ရနျကုနျမွို့ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့မိဘမြိုးရိုးကို ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ သူမဟာခုထကျထိနာမညျကြျောကွားနဆေဲဖွဈတဲ့ စာရေးဆရာကွီး ဒဂုနျတာယာရဲ့တူမ ဖွဈပါတယျ။ ရဲဘျောသုံးကြိပျအဖှဲ့ဝငျဗိုလျဇယေရြဲ့မွေး တျောစပျသူလညျး ဖွဈပါတယျ.
မငျးသားကွီးကောလိပျဂငျြနဝေငျး တူမတျောစပျဖွဈပွီး ရာဇာနဝေငျးနဲ့ ဟမောနဝေငျးတို့နဲ့လညျး အမြိုးတျောစပျသူပဲဖွဈပွီး ပိုငျဇရေဲထှနျး မောငျနှမဝမျးကှဲ တျောစပျသူဖွဈပါတယျ ။ဒါ့အပွငျ သူမကတူမလေးဖွဈတဲ့မတေိုးခိုငျကိုလညျး သမီးလေးတဈယောကျလို ခဈြခငျသူဖွဈပွီးအနုပညာ
လမျးကွောငျးပျေါကိုရောကျအောငျ မွတေောငျမွှကျေပေးသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူမက ၁၉၉၆ခုနှဈကနစေတငျပွီးမျောဒယျလျတဈယောကျအနနေဲ့ စတငျဝငျရောကျာလာပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ တီဗီမှာကွျောာငွာမငျးသမီးအနနေဲ့တပွိုငျနကျထဲမှာပဲ မွနျမာဇာတျလမျးတှထေဲမှာ ကရြာနရောကနပေါဝငျသရုပျဆောငျလာသူပဲဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့အပွုံးခြိုခြိုလေးတှနေဲ့အတူ သရုပျဆောငျကောငျးမှုတှကွေောငျ့
ပရိသတျတှရေဲ့ရငျထဲမှာနရောတဈနရောကို ယူထားနိုငျပွီးအကယျဒမီဆုတှကေို ရရှိခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါမှာလြှောကျလှမျးနရေငျးနဲ့ မွနျမာ့မငျးသားထဲမှာထိပျဆုံးကအောငျမွငျနတေဲ့မငျးသားဖွဈသူ
ပွတေီဦးနဲ့ရှလေကျတှဲပွီး အောငျမွငျပွီးလူတိုငျးက အားကရြတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို သမီးလေးတဈယောကျ သားလေးတဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူမကတော့ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးအဖွဈ ရမှေေးနဲ့ အိတျတှကေိုလညျး သူမအမညျနဲ့တငျသှငျးတဲ့အလုပျကိုလညျး လုပျကိုငျနသေူဖွဈပါတယျ။
ခုလကျရှိမှာတော့သူမရဲ့ကိုယျထဲမှာ စီးဆငျးနတေဲ့မတရားမှုကို ငွိမျကွညျ့နလေို့အဆငျမပွတေဲ့အတှကျကွောငျ့ သူမတို့ဇနီးမောငျနှံကတော့ အဖမျးခံထား၇တာ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှရေဲ့ ပို့သတဲ့မတ်ေတာကွောငျ့ သူမတို့မိသားစုလေးအရငျလိုပြျောပြျောရှငျရှငျပွနျနထေိုငျနိုငျဖို့အတှကျ ပရိသတျကွီးနဲ့အတူ ဆုတောငျပေးကွရအောငျနျော….
နားချိန်မရှိလို့ ထမင်းကိုတောင် သင်္ချိုင်းကဇရပ်မှာပဲ ကြုံသလိုစားနေကြရတဲ့ ပရဟိတသူရဲကောင်းတွေရဲ့ ပုံရိပ်တစ်ချို့
၃၈ နှဈတိုငျတနျဖိုးထား လုပျခဲ့တဲ့ အနုပညာကိုတောငျ CDM လုပျပွီး စှနျ့ခဲ့တာ BLACK LIST စရငျးလောကျကတော့ စောကျဂရုမစိုကျဘူး လို့ ပွောလာတဲ့ ပွညျသူ့အခဈြတျော မငျးမျောကှနျး